DW-HF-35kw induction အပူပစ္စည်းကိရိယာ, သော induction အပူပေးစက်, ကိရိယာ၏ Manufactuer
ပင်မစာမျက်နှာ / မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction အပူ / DW-HF-35kw induction အပူပေးစက်
အမျိုးအစား: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction အပူ Tags: DW-HF-35kw, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction device ကို, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction အပူ device ကို, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction အပူစက်, မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းသော induction စနစ်က, သော induction အပူပေးစက်, induction အပူကိရိယာများ, သော induction အပူပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ
ထိပ် induction အပူစက်တွေထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသော induction brazing ဖြစ်စဉ်ကိုအဘို့, စက်မှုဇုန်သတ္တုအရည်ပျော်, induction Forge, PWHT, induction preheat ဂဟေဆော်, မျက်နှာပြင် hardening လျောက်ပတ်, induction, စသည်တို့ကျုံ့။
၁. ၁၀၀% တာဝန်ယူထားသောစနစ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုအများဆုံးစွမ်းအားဖြင့်ခွင့်ပြုသည်။
4. ပါဝါအပူနှင့်အပူ currentand လှိုကြိမ်နှုန်း၏ပြသမှု။
၅။ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကြိမ်နှုန်း၏ Auto-လျော်ကြေးပေးသော circuit သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်မြင့်မားသောတိကျသောပါဝါစတင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုသည်အပူနှင့်ဘေ့စ်တည်ငြိမ်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။
DW-HF-45kw induction အပူပစ္စည်း
လက်ကိုင်အဝေးမှ induction အပူပေးစက်